नेपाल आज | कालिमाटीका प्रहरी क्वारेन्टाइनमा : सडकको सुरक्षा कसले सम्हाल्ला ?
कालिमाटीका प्रहरी क्वारेन्टाइनमा : सडकको सुरक्षा कसले सम्हाल्ला ?
कालिमाटी प्रहरी बृत्तका करिव सय कर्मचारीलाई क्वारेन्टाइनमा लैजाने तयारी हुँदैछ । तर, उनीहरुलाई लगिने भनिएको क्वारेन्टाइनमा ६० जनाको क्षमतामात्रै छ ।
त्यहाँका एकजना सहायक निरीक्षक (असई) र जवानको पिसिआर परीक्षण पोजेटिभ आएपछि पूरै बृत्त, त्यहीँभित्र रहेको ट्राफिकसहित महिला सेल पनि सिल गरिएको छ । तर, समस्या छ, क्वारेन्टाइनको ।
तीनैवटा युनिटका प्रहरी संख्या सयभन्दा बढी छ । तर,केन्द्रीय प्रहरीले तयार पारेको सामाखुशीस्थित सशस्त्र गण नं. २ को क्वारेन्टाइन त्यति क्षमताको छैन ।
अहिलेसम्म उनीहरुलाई कुन–कुन क्वारेन्टाइनमा पठाइने भन्नेबारे टुंगो नलागे पनि पहिलो प्राथमिकतामा सोही गण परेको छ । त्यसबाहेक महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान वैकल्पिक क्वारेन्टाइन हुनसक्ने प्रहरीस्रोतले जनाएको छ । क्वारेन्टाइनमा राखिएका प्रहरीलाई उनीहरुको स्केलअनुसारको खाना राखिएकै युनिटको मेसबाट दिइने छ ।
यससँगै पूरै कार्यालय सिल गरिएपछि उक्त बृत्तले गर्ने कामहरु बाँडिएको छ । तत्कालका लागि टेकुस्थित प्रहरी परिसर र भृकुटीमण्डपस्थित घटना सहायता कार्यदल (नगर प्रहरी) बाट थप मद्दत परिचालित गरिएको छ । ती टोलीले कालिमाटी बृत्तको क्षेत्रमा हुँदै आएका कर्डन ड्युटी लिनेछन् ।
त्यसबाहेकका काम गर्न सिंहदरबार,स्वयम्भू, कीर्तिपुर र थानकोट प्रहरी बृत्तले सघाउने भएका छन् । ती युनिटहरुले कालिमाटीको क्षेत्रमा पर्ने सिमानामा आइपर्ने समस्या हेर्ने भएका हुन् ।
क्वारेन्टाइनमा राखिने सबै प्रहरीको आजै कोरोना परीक्षणका क्रममा पिसिआर किटबाट नमुना संकलन गर्ने तयारी भइरहेको छ । पिसिआर परीक्षणबाट नेगेटिभ नतिजा आउने प्रहरीलाई क्वारेन्टाइनबाट छिट्टै मुक्त गरिने र काममा पठाइने स्रोतले जनाएको छ । अहिले महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा यसबारे बैठक बसिरहेको छ ।